Messenger Chatbot - Bits Century
လူကြီးမင်းရဲ့ Page မှာ အမြဲ ကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီး Reply ပြန်ဖြေရတာနဲ့ အချိန်ကုန်နေပြီလား ?
Messenger မှာဝယ်သူတွေများလွန်းလို့ Reply လုပ်ရတာမောနေပီလား ?
ဒါတွေကို Messenger မှာ အလိုအလျောက် ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတဲ့ Bits Century က Chatbot လေးက ဖြေရှင်းပေနိုင်ပါတယ်။
Chat Bot ဆိုသည်မှာ Messenger တွင် လူကြီးမင်းလုပ်ငန်း ထုတ်ကုန် ၊ ဝန်ဆောင်မှုများကို အလိုအလျောက်ပြန်လည်ဖြေကြားပေးနိုင်ပါသည်။ဒါတင်မကသေးပါဘူး
ထုတ်ကုန် နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တစ်ခါထဲ Messenger မှာဝယ်ယူလို့ရအောင်ပါ Ecommerce အနေနှင့်လဲ Chatbot လေးက ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Fight Covid10% Off
Fight Covid15% Off
Fight Covid20% Off
Products ၁၀ ၂၀ အကန့်အသတ်မရှိ
Categories ၃ မျိုး ၅ မျိုး အကန့်အသတ်မရှိ
Attribute ၅ မျိုး ၁၀ မျိုး အကန့်အသတ်မရှိ
ဝယ်ယူမည် Buy Now ဝယ်ယူမည်